नेपाली जनताको स्वार्थ नै मुख्य कुरा हो- प्रचण्ड
व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने लगभग निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी चलिरहेको छ । यसबीचमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा निकै चासो दिइरहेका छन् ।
उनीहरुले ओलीको बहिर्गमन र प्रचण्डको आगमनलाई भारतको जीतको रुपमा चर्चा गरिरहेका छन् । यसबीचमा भारतकै चर्चित पत्रिका ‘टाईम्स अफ इण्डिया’ले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लिएको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ । केशव प्रधानले लिएको सो अन्तर्वार्तालाई हामीले भावानुवाद गरेका छौं ।
मुलुकलाई लामो संकटबाट पार लगाउन तपाईंको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
नेपाल धेरै आरोह-अवरोहबाट गुज्रिएको छ । अहिले हामी नयाँ राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ । यी सबै कुरालाई हामी सर्वस्वीकार्य हुनेगरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहन्छौँ ।
अब तपाईंका लागि सबैभन्दा अफ्ठ्यारो काम के हो ?
संविधान कार्यान्वयन नै हो । मधेसी, आदिवासी-जनजाति र थारुसँग सम्बन्धित मुद्दामा सहज वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौँ । त्यसपछि भूकम्पपीडितहरुको आवासको समस्या, शान्ति प्रक्रिया (जुन माओवादी राजनीतिको मूल धारमा आएपछि सुरु भएको थियो)लाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने नै हो ।
ओलीको बहिर्गमन र प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईंको आगमनले बेइजिङभन्दा दिल्लीलाई फाइदा पुग्ने चर्चा भारतमा छ नि !
यसप्रकारको हावादारी र सतही विश्लेषणले कसैलाई फाइदा गर्दैन । हाम्रो देशमा रहेको समस्यागत अवस्थाको गम्भीरता र महत्व नबुझिकन यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । यो कसैको हारजितको कुरा होइन ।
ओलीले आफ्नो बहिर्गमनमा भारतको हात छ, भन्छन् नि !
एकदम गलत । उनले जे भनिरहेका छन्, यसले स्वयम उनीसहित हामी सबैलाई समस्यामा पार्छ ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईंको पुनर्गमनमा कुनै बाह्य शक्तिको हात छ ?
अहँ, कसैको पनि छैन ।
कम्युनिष्ट सहयात्री (ओली)सँग गठबन्धन तोडेर गैर-कम्युनिष्ट काँग्रेस (शेरबहादुर देउवा जसले तपाईंको टाउकोको मूल्य ५० लाख तोकेका थिए)सँग किन हात मिलाउनुभयो ?
यसका धेरै कारणहरु छन् । ओलीजीले हामी र उनी मिलेर सम्बोधन गर्नु पर्ने केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा निकै नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जबकि हामीले असन्तुलित कुटनीतिदेखि लिएर शान्ति प्रक्रिया र मधेस समस्यासम्मलाई सही बाटोमा लैजानु पर्ने आवश्वयकता औंल्याएका थियौँ । ओलीजीसँगको हाम्रो सहकार्यमा सही दिशातर्फ गइरहेको थिएन ।
शान्ति प्रक्रियाको सहयात्री काँग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘यदि जंगलमा कसैले बाटो बिरायो भने जहाँबाट यात्रा सुरु भएको हो, त्यहीँ पर्किनुपर्छ ।’ त्यसैले हामी आफ्नो विश्वास र भरोसाको बाटोमा फर्किएका हौँ । गिरिजाबाबुको पालामा नै एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको थियो । सन २००५ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछिको शान्ति सम्झौताको आधारमा नै अब हामी अगाडि बढ्छौँ ।
भारतले राणा शासनपछिको शान्ति स्थापना कार्यमा पनि सहजकर्ताको भूमिका खेलेको थियो, १२ बुँदे समझदारीमा पनि भूमिका रह्यो, अब भावी दिनमा खेल्नसक्ने त्यस्तो कुनै भूमिका छ ?
आन्तरिक विषयमा नेपाल र नेपाली जनता आफैँले अन्तिम निर्णय गर्नेछन् । हो, बाह्र बुँदे सहमतिमा भारतको भूमिका थियो, यो कुरा भने हामीले स्वीकार्नु पर्छ ।
तपाईं माओवादी विचारधाराबाट आएको मान्छे, अब बन्ने गठबन्धन सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ ?
हाम्रोलागि नेपाल र नेपाली जनताको स्वार्थ नै मुख्य कुरा हो । कुनै पनि कुराले यो राष्ट्रिय स्वार्थबाट हामीलाई टाढा पुर्‍याउन सक्दैन । नेपाली जनताको पक्षमा भएका विषयहरुमा मात्रै भारत, चीन र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग सहकार्य हुनसक्छ । साथै भारतसँगको हाम्रो अद्वित्तिय सम्बन्ध पनि हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ ।